French Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(235 mavhoti, avhareji: 4.99 kubva 5)
Loading ...Zvinotoshamisa kuti muParis nenzvimbo dzakapoteredzwa hakuna kubhejera. Izvi zvinokonzerwa nekuti pasi pemutemo wazvino weFrance, makasino anogona kuiswa chete munzvimbo dzakatambirwa zviri pamutemo nzvimbo yekutandarira uye anobva kuParis, chinhambwe chemakiromita anopfuura zana. Iyo yega yega ndeye kasino muEngen. Iyi nzvimbo yekutandarira iri 100 km kubva kuChamps Elysées. Vhura makasinasi muEngen-les-Bains aive muna 14. Mushure memakore gumi, yaive theatre yakavhurwa, uye munguva yehondo chipatara chaive pano. Muna 1901 yakatengwa naGroupe Lucien Barrière. Muna 10 chivakwa chakavakwazve, uye kasino nyowani yakavhurwa muna Kubvumbi 1988. Mukati weCasino wakagadzira dhizaini ane mukurumbira Jacques Garcia. Akashongedza kasino magetsi matsime, siringi ine nyeredzi, nyanza uye zvigadzirwa zvepamusoro. Parizvino, nzvimbo yekubhejera muEngen - makasino anobatsira kwazvo muFrance. Iyo ine matafura e stud poker, blackjack, pamwe neChirungu neFrench roulette nemimwe mitambo. Iko kune zvakare michina yekubhejera.
Rwokutanga kwe10 French Online Casino Sites
Slot machines mumakasino ku Engen-les-Bains
Yekutanga kubhejera kuFrance yakavhurwa muParis muzana ramakore rechi17. Ichi chiitiko chakatora chinzvimbo chakakosha mukusimudzira indasitiri yekubhejera, kwete muFrance chete asi pasirese. Kutanga, kubhejera inzira yekuzadza hupfumi hwenyika, kubatsirwa kwehupfumi nekuvapo kwemasangano aya kwaive pachena, saka, kwakatanga kuoneka sekasino nyowani. Mushure meFrance Revolution, iyo kasino inorambidzwa, uyezve inozivikanwa. Vatambi vekasino vekutanga vanogona kutamba chete yakaganhurirwa nhamba yekubhejera uye roulette, asi nekuvandudzwa kweindasitiri yekubhejera yakawedzera huwandu hweanopihwa kubhejera. Zviya, parizvino iri kunakidzwa nemukurumbira akadaro roulette yakagadzirwa, sekureva kwevanyori vezvakaitika kare, yaive muFrance. Hunhu hwayo kugadzirwa Blaise Pascal, huzivi, uye masvomhu ayo anoshandiswa mukugadzirwa kwekusingaperi kufamba.
Nhasi muFrance kune mapoka mashanu, ayo ari echesi yepamusoro yenyika:
- Boka raLucien Barrière;
Казино “Barrièrede Deauville
Mamwe emasangano aya anosanganisira kasino Barrièrede Deauville, iri mutaundi reDeauville. Nhoroondo yekasino iyi ine makore anoda kusvika zana nemakumi mashanu. Yakawanikwa muna 150, ndiyo yakatanga iyo Duc de Morny, asi bhizinesi rekasino rakanga rakaipa uye rakavharwa. Kuwanikwa kutsva kwesangano iri kwakaitika kare muna 1864. Kwaari, yakavakwa chivakwa chitsva mutsika yekuvakwa kweAtene, chivakwa ichi chiripo parizvino. Iyi kasino yakave inodiwa nzvimbo yekrimu yeFrance neBritain nzanga, pamwe nevazhinji vezvemabhizinesi nevakakurumbira. Izvi zvivakwa zvemitambo - mucherechedzo wekunaka kweFrance neumbozha. Nhasi, iyo institution ine muzukuru Lusena Barrier, iyo inonzi zita mukukudza kwenzvimbo yekubhejera. Iyi kasino ine hombe yekubhejera: 1912 slot michina uye makumi maviri nemana matafura emitambo yemitambo muPunto Banco, Roulette, Blackjack, craps, nevamwe. Kune zvakare matatu mabhawa, matatu maresitorendi, mabiko uye nzvimbo dzemusangano, hotera mazana manomwe zvigaro. Kuti uende kumakasino unofanirwa kupa gwaro rezvitupa uye kutora chikamu mumitambo pamatafura iwe unofanira kutanga wanyoresa.
Casino «LE LYON VERT» yakavhurwa muna 1882, uye muna 1991 yakatanga kuva veboka Partouche. Inowanikwa muLyon. Iyi yekubhejera inovakwa ine hombe kubhejera dzimba, maresitorendi uye hotera diki. Mune ino kasino senge mune chero ipi zvivakwa zvekubhejera muFrance, pane huwandu hukuru hwemakina emitambo: vhidhiyo poker, pane 174 uye 224 akaisa michina slots. Iko kune zvakare mukana wekutamba muAmerican uye European roulette, Texas Hold'em poker, blackjack uye mimwe mitambo yemukana. Panguva yekuzorora, unogona kugara muresitorendi, uchinakirwa nekicheni yakanaka.
Casino Aix-en-Provence, inonyatso kuzivikanwa sePasino, yakavhurwa muna 1923. Kuvakwa kwaro kwakave chirongwa chikuru chekuvandudzwa kwemaguta chakagadzirwa neMasipare. Iyo chirongwa chaisanganisira imba yekubhejera, chipatara chipatara, imba hombe yamambo uye paki yakanaka. Casino Pasino inogona kutamba mitambo yakasiyana siyana yemukana, kusanganisira kuve nemukana wekutamba pamichina yemuchina, vhidhiyo poker, roulette uye vhidhiyo, mukuwedzera, mhando dzakasiyana dzemitambo yemakadhi uye zvimwe zvekuvaraidza. Iko kunogara kuchiitwa zviitiko zvakawanda zvekuvaraidza, kusanganisira akasiyana makonzati nemitambo, mitambo yemitambo.
Iyo SEVEN yakakura kasino muFrance, inovhara nharaunda ye650 mativi emamita, iri kurova saizi yayo, pamwe nekuvaraidza nekunze kwekunze uye kushongedzwa kwemukati. Inogona kufananidzwa nekunaka kwedhaimani. Icho chinoreva kuchizvarwa chitsva chemaseti ekubheja. Nechomukati pfungwa yemakasinasi yakapesvedzera ngano yaRoald Dahl's "Charlie neChokoreti Fekitori." Iyo kasino haigone kungotamba mitambo yemukana wemari, asiwo kunakidzwa nedzimwe mhando dzevaraidzo.
Kasino «Cannes Croisette» iri mumoyo weakakurumbira Palais des Festivals muCannes, muridzi weboka Lucien Barrière. Iyo yakazara nzvimbo yenzvimbo yekutamba ndeye 3,000 mativi metres. Makamuri emitambo akashongedzwa muchimiro chazvino. Muhoro dzekasino iwe unogona kutamba mitambo yakadai se poker, blackjack, roulette, baccarat uye slot michina ipapo. Nzvimbo yeCasino kune akati wandei mabhawa, gastronomic restaurant uye nightclub. Unogona kubhuka kamuri pahotera.
Inofanira kuti "Paris" uye "Eiffel Tower", sezvo moyo yakawanda inotanga kurova nekukurumidza uye fungidziro inopenda mufananidzo wekudanana. Nhasi CasinoToplists vachashanyira iyo nyika yerudo nerusununguko - France. Saka, kutsanangura chirevo chakakurumbira, ibasa redu nhasi "kuona Paris nekutamba."
France - mashoma mazwi nezve nhoroondo uye geography;
kunyoresa mvumo yekubhejera casino iri munzvimbo dzinoshandiswa;
Ndiyo basa reMutariri Wemukati.
Makasitos anozivikanwa zvikuru muFrance:
Club Aviation Club de France muParis;
Casino Enghien 14 km kubva kuParis;
kubhejera imba muMegève Mont Blanc.
Zvitsva zvishanu zveParis nematarenda;
Nzvimbo yeFrance, uye nhepfenyuro pfupi yemamiriro ezvinhu
France - inonakidza nyika muWestern Europe yakasangana nenguva dzakawoma, asi yakashanduka ikava imwe yeakanakisa uye akachengeteka pasirese. Zita rakazara rehurumende - French Republic. MuFrance, kodzero dzevanhu uye nyika zvevanhu chete. Motto - "Rusununguko, Kuenzana, Hukama."
Musoro wenyika mutungamiri wenyika, VaFrancois Hollande, asi masimba mazhinji akapiwa Mutungamiriri Manuel Valls. Nhasi, vanhu vanopfuura mamirioni makumi matanhatu nematanhatu muFrance, pavari 66% - vagari venyika. Runyorwa rwenyika rwakajeka uye rwakasiyana, kunyangwe hazvo iro raitongwa neFrance. Kune maAlsatians mazhinji, lotaringtsev, Britons, maJuda, Flemish, Catalans, Basques, Corsicans, Armenians.
Guta guru reFrance - inofadza Paris, iyo, sezvamunoziva, kuona uye kufa murunyararo. Nhoroondo yeguta razvino uno, iri musha kune vanhu vangangosvika mamirioni maviri nemazana maviri, rakatanga muzana ramakore rechitatu BC. e. Iyi inoshamisa tsika, nhoroondo, hupfumi uye zvematongerwo enyika nzvimbo, inoyevedza nerunako uye runako rukuru.
France inoreva zvakanaka kubhejera vein kune vagari vayo nevashanyi, munharaunda yemazhinji macasino nedzimba dzekubhejera, asiwo mitemo yesangano ravo yakaoma. Ngationgororei.
Casinos uye Kubheja muFrance
France - imwe yenyika dzine njodzi zvakanyanya pasi rose, uye maFrance - mumwe wevatambi vakanyanya kushupika. Kubhejera kwakawanda kwakaitika pano.
Nenzira, mazhinji emakasino munyika, kunyangwe nemitero yakabhadharwa pane yakadai se "mutambo weFrance." Imwe yemhando dzeroulette inonziwo "French Roulette" (inozivikanwawo seEuropean Roulette); uye pakati pemhando dzeroulette, French naimenshee ine mukana wecasino, iyo isingatadze kufadza vateveri vemutambo.
Semunyika zhinji dzeEurope, muFrance, hunhu hwakakosha pakubhejera. Ivo vanonyoreswa zviri pamutemo, asi iwe unogona kutamba chete munzvimbo dzakasarudzika. Casino kuvhura kutanga kubva muna 1942 chete munzvimbo idzo dzine chinzvimbo chepamutemo chekutandarira, asi dzinofanirwa kubviswa kuParis kwete pasi pezana remakiromita.
Mutemo usati watambirwa munyika maive nedzimba zhinji dzekubhejera, zhinji dzacho dzaifanirwa kuvharwa. Nhasi uno zvinoshanda zviri pamutemo makasino e197, ese ayo anotungamirwa nebazi rezvemukati. Kudzora kwemasangano, maitiro ekutamba uye sevhisi yakaiswa pane zvinopfuura zvakakomba.
Kugadziriswa pakuvhurwa kwekasino nyowani kunopa gurukota rezvemukati mega pacharo, asi mvumo yekutanga inopihwa padanho redunhu, inogamuchirwa nePlenipotentiary Commission. MIA inotsanangura runyorwa rwemitambo yechikoro inosarudza vese vashandi.
Muna 1986 mitemo yakasarudzika inoshanya inobvumidzwa mukova wevakadzi. Vashandi havabvumirwi kuunza kasino kuzoshanda mari kana machipisi, kuti mutemo uyu waionekwa, vakasona zvipfeko zvakakosha zvisina homwe. MuFrance, unogona kutamba kubva pamakore gumi nemasere. Kurambidzwa kupinda kune vanhu vakapfeka yunifomu. Mukasino yega yega pane dema rondedzero, inoisa Schuler, anorasikirwa uye ludomany (mazita avo ane kodzero kune vehukama), uye nevamwe vasingagamuchirwe vaenzi.
Casino muFrance haisi nzvimbo yemunharaunda chete, asiwo sosi yakasimba yemari. Gore rega rega, bhajeti rakagashirwa mazana emamirioni ema euro. Progressive tax yezvivakwa, purofiti inodarika 9.5 mamirioni euros, chikamu chakakura - 80. Chete michina inogadzira 50% yemari, makadhi - anenge 40%, mamwe ese anowira patafura ye roulette.
Makasinos anozivikanwa zvikuru muFrance
Kunyange zvazvo zviri pamutemo muParis mune kamba, pane chikwata Aviation Club de France , iyo yaibvumidza mimwe mitambo, senge poker, baccarat uye backgammon. Iyi ndiyo imwe yenzvimbo dzepamusoro-soro dzenyika, yakavhurwa muna 1907. Kune nguva dzose zvakanyatsoomerera kune kodhi yekupfeka. Kuti upinde mukati, ive shuwa yekupfuura kumeso kutonga, kusanganisira mbichana cheki, isa kirabhu kadhi. Iwe unogona zvakare kupfuudza kukoka kwemuridzi wekadhi. Muna 2005 kwakaitika World Poker Tour, uku kukudzwa ndiko chete kwakanakisa kwese kwakanakisa.
Imwe yakasarudzika - iyi kasino Enghien , iri 14 km chete kubva kuParis. Engen inzvimbo inoyevedza inoshamisa pamhenderekedzo yegungwa, iyo-imba-awa kubva 10am kusvika 4 husiku. Iyo mitambo yakaoma nemaresitorendi, mahotera, theatre uye nhabvu yemitambo Vanouya pano kuzotamba roulette, akasiyana makadhi mitambo uye mazana mana nemakumi mana emidziyo yemuchina.
Ane charenzi chaiyo yekubhejera imba Megève , iri paMont Blanc. Iyi kasino ine chivimbo inobata hutungamiriri maererano nemari. Izvi hazvishamise, nekuti yakakomberedzwa nehunhu hwakanaka, inopa kwete chete kubheja zororo, asiwo mukana wekushandisa nguva ku disco, mubhawa yepiyano kana muresitorendi.
De Deauville Barrière - yakanakisa kasino, iri munzvimbo yegungwa. Iyo iri pakatarisana negungwa rinozivikanwa reiyo firimu "Murume uye Mukadzi" Lelouch. Iyi nzvimbo inoonekwa seimwe yeakanaka kwazvo muFrance.
Eiffel Shongwe. Kero: Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France. Icho chiratidzo cheParis neFrance - icho chinotaura zvese.
Triumphal Arch. Kero: Isa Charles de Gaulle. Iyo yakaremara yekare arch, yakavakwa nekuraira kwaNapoleon mukucherechedza kukunda kwake kukuru.
Louvre. Nzvimbo: Palais Royal. Imwe yemamuseum mizhinji muEurope, iri muRoyal Palace.
Notre Dame de Paris. Kero: 6 Parvis Notre-Dame - Nzvimbo Jean-Paul II. Mwoyo wemweya Parida uye yakanaka chechi yeKaturike.
Luxembourg Gardens. Kero: 6e Arrondissement. Imba yemuzinda uye paki yakaoma, yakarara pamahekita makumi maviri nematanhatu.
Chokwadi chinofadza pamusoro peFrance neFrance
Zita renyika "France" rine gangaidzo yechiGerman, zvinobva pamazita emadzinza evaFrank vanogara munzvimbo iyi. Kunyangwe hazvo vanhu vese vachitaura mutauro uye vaine chiRomanesque kunyanya Gallo-Roman mavambo, zita iri rakauya nekuda kwemutauro wechiGerman.
MuFrance, dzimba huru dzenyika - 4969.
Yaive muFrance yakagadzira iyo sinema, bhasikoro, ballet, chanson, Gothic.
Kubva 2011, redhiyo yeFrance neterevhizheni inorambidzwa zviri pamutemo kutaura Facebook ne Twitter.
Panguva yemasikati, vaFrance vaigara vachiita waini.
France - Center for European kurima.
Varume veFrance vanotaura, vachisarudza vakadzi vakadaro vaunogona kutaura navo.
MuFrance, mitero yakakwirira kwazvo muUnited States.
Vanhu vazhinji veFrance vanoda kugara muCanada.
France payepu yeEurope
0.1 Rwokutanga kwe10 French Online Casino Sites
1 Kubhejera muFrance
1.0.1 Nzvimbo yeFrance, uye nhepfenyuro pfupi yemamiriro ezvinhu
1.1 Casinos uye Kubheja muFrance
1.1.1 Makasinos anozivikanwa zvikuru muFrance
1.1.3 Chokwadi chinofadza pamusoro peFrance neFrance
1.1.4 France payepu yeEurope